Tsamba Yechipiri kuvaTesaronika 2:1-17
Munhu asingateereri mutemo (1-12)
Kukurudzirwa kumira vakasimba (13-17)
2 Asi hama, panyaya yekuvapo kwaShe wedu Jesu Kristu+ uye yekuunganidzwa kwatichaitwa kwaari,+ tinokukumbirai 2 kuti musatsauswa nyore nyore pakufunga kwenyu kana kuvhundutswa nekutaura kunenge kuchiitwa zvekufemerwa*+ kana neshoko rinoita zvekutaurwa kana netsamba inoita seinobva kwatiri, zvichinzi zuva raJehovha*+ rasvika. 3 Ngaparege kuva nemunhu anotombokutsausai,* nekuti harisi kuzouya kusvikira kutsauka pakutenda+ kwatanga uye munhu asingateereri mutemo,+ mwanakomana wekuparadzwa,+ ava kunyatsozivikanwa. 4 Iye anopikisa uye anozvikwidziridza pamusoro pevese vanozviita vanamwari kana chimwe chinhu chinonamatwa, zvekuti anogara mutemberi yaMwari, achizviratidza pachena kuti iye ndimwari. 5 Makanganwa here kuti pandakanga ndichiinemi, ndaiwanzokuudzai zvinhu izvi? 6 Iye zvino munoziva kuti chii chiri kumudzora kuti asanyanya kuzviita, kuitira kuti azoratidzwa kana nguva yake yakwana. 7 Ichokwadi kuti kusateerera mutemo uku kwava kutoitika kwakavanzika,+ asi kuchazobuda pachena kana uya ari kuita kuti zvisanyanya kuenderera asisipo. 8 Kana zvadaro, munhu asingateereri mutemo achabva abudiswa pachena; achaparadzwa naIshe Jesu nemweya wemuromo wake,+ paacharatidza+ kuvapo kwake. 9 Asi kuti munhu asingateereri mutemo avepo, Satani+ ndiye anenge achiita mabasa esimba, zviratidzo zvenhema nezvishamiso+ 10 achishandisa nzira dzese dzisina kururama kunyengera+ vaya vari kuparara, kuti varangwe nekuti havana kuratidza kuti vanonyatsoda chokwadi kuti vaponeswe. 11 Ndokusaka Mwari achivarega vachizvifurira kuti vabvume nhema dzacho,+ 12 kuti vese vatongwe nekuti havana kubvuma chokwadi asi vakafadzwa nekusarurama. 13 Asi hama dzinodiwa naJehovha,* tinofanira kugara tichitenda Mwari nekuda kwenyu, nekuti kubvira pakutanga Mwari akakusarudzai+ kuti muponeswe nekukutsvenesai+ nemweya wake uye nekutenda kwenyu muchokwadi. 14 Akakudanirai izvozvo achishandisa mashoko akanaka atinozivisa, kuti muwane kubwinya kwaShe wedu Jesu Kristu.+ 15 Saka hama, mirai makasimba+ uye rambai makabata zvamakadzidziswa,+ mungava makazvidzidziswa nemuromo kana kuti netsamba yakabva kwatiri. 16 Zvakare, Ishe wedu Jesu Kristu naMwari Baba vedu, avo vakatida,+ ndokutipa nyaradzo isingaperi netariro yakanaka+ vachishandisa nyasha dzavo, 17 ngavanyaradze mwoyo yenyu vachikusimbisai pamabasa uye pamashoko ese akanaka.
^ Kana kuti “kutaura kwemweya.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Mweya.”
^ Kana kuti “anotombokunyengerai.”